LATAM dia manambara ny toerana vaovao any Karaiba, mampitombo ny fifandraisana avy any Lima
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » LATAM dia manambara ny toerana vaovao any Karaiba, mampitombo ny fifandraisana avy any Lima
Ny LATAM Airlines Group dia nanambara sidina vaovao roa avy ao amin'ny foiben'i Lima, ao anatin'izany ny toerana vaovao any Karaiba, Montego Bay (Jamaica), ary serivisy mivantana mankany Calama, Chile.
Manomboka amin'ny 1 Jolay 2019, ny LATAM Airlines Peru dia hiasa sidina telo isan-kerinandro mankany Montego Bay, izay manome fifandraisana mety amin'ireo tanàna any Però, Chile, Arzantina, Brezila, Uruguay, Paraguay ary Bolivia. Ny zotra dia ho entin'ny fiaramanidina Airbus A320 izay mahazaka mpandeha 174, mitovy amin'ny totalin'ny seza 52,600 XNUMX isan-taona.
Ny andro manaraka (2 Jolay 2019), ny LATAM dia hanomboka sidina tsy miato telo isan-kerinandro avy any Lima mankany Calama (Chile), ny vavahady mankany San Pedro de Atacama, mampihena ny fotoana fivezivezena amin'ireo tanàna roa ireo mandritra ny adiny efatra, 30 minitra.
"Amin'ny volana jolay ho avy izao dia hanolotra safidy lehibe kokoa ho an'ny mpandeha izahay miaraka amin'ny toerana vaovao any Karaiba ary koa fotoana fohy kokoa eo anelanelan'ny Lima sy Calama, izay vavahady mankany San Pedro de Atacama," hoy i Enrique Cueto, CEO an'ny LATAM Airlines Group. "Ao anatin'ny fanoloran-tenanay hanolotra fifandraisana tsy manam-paharoa any Amerika Latina, dia manohy manamora ny fitadiavana izay tsara indrindra aroson'ity faritra ity izahay, miaraka amina toeran-kaleha sy safidy sidina noho ny vondrona sidina hafa."
Toerana vaovao any Karaiba: Bay Montego
Any avaratra atsinanan'i Jamaika no misy an'i Montego Bay no ivom-bolan'ny nosy ary vavahady lehibe mankamin'ny toeram-pialan-tsasatra sy ny fizahantany fizahan-tany. Ny toetr'andro tropikaly any Jamaika, ny morontsiraka fotsifotsy, ny rano madio mangarahara ary ny lova ara-kolontsaina manankarena dia misarika ny mpitsidika erak'izao tontolo izao.
Manomboka amin'ny 1 Jolay 2019, ny sidina LATAM Airlines Peroa LA2464 (Lima-Montego Bay) dia hiala amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Jorge Chávez ao Lima amin'ny Alatsinainy, Alakamisy ary Alahady amin'ny 12:05, ary tonga ao Montego Bay amin'ny 17:00. Ny sidina miverina (LA2465) dia hiasa amin'ny andro mitovy ary hiala amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Sangster amin'ny 18:05, ary tonga ao Lima amin'ny 22:50 (eo an-toerana hatrany).
Miaraka amin'ny fanampiana an'i Montego Bay, ny LATAM dia hanompo toerana dimy any Karaiba sy Amerika afovoany: Havana (Cuba), Punta Cana (Repoblika Dominikanina), Aruba ary San José (Costa Rica), ary koa ireo trano fandraisam-bahiny hafa manamorona ny morontsirak'i Karaiba anisan'izany i Cancun (Mexico), Cartagena ary San Andrés (Kolombia).
Manomboka amin'ny 2 Jolay 2019, ny sidina LATAM Airlines Peroa LA2387 (Lima-Calama) dia hiala amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Jorge Chávez ao Lima ny talata, alakamisy ary alahady amin'ny 00:15, ary tonga ao Calama amin'ny 03:45. Ny sidina miverina (LA2386) dia hiasa amin'ny andro mitovy ary hiala amin'ny Seranam-piaramanidin'i El Loa amin'ny 04:35, ary tonga ao Lima amin'ny 06:05 (isaky ny toerana rehetra).
Miaraka amin'ny faharetan'ny sidina mivoaka sy miverina adiny roa, 30 minitra, ny serivisy Lima-Calama tsy mijanona dia hampihena ny fotoana fivezivezena eo anelanelan'ny tanàna manodidina ny efatra ora, 30 minitra. Ny serivisy dia voalahatra koa hifandray tsara amin'ny sidina mankany / avy any Etazonia ary hiasan'ny fiaramanidina Airbus A320 manana fahaiza-manaon'ireo mpandeha 174, manolotra seza 54,400 isan-taona.
Fanitarana ny tambajotra LATAM
Nandritra izay telo taona lasa izay, ny LATAM dia nanangana làlana vaovao 67 tsy mbola nisy toa azy, mampitohy ny faritra toy ny tsy misy vondrona fiaramanidina hafa misy sidina mihoatra ny 1,300 isan'andro mankany amin'ny tanjona 140 manerantany. Tamin'ny taona 2018 fotsiny, ny LATAM dia nanokana serivisy ho an'ireo toerana iraisam-pirenena vaovao toa an'i Costa Rica, Boston, Las Vegas, Roma ary Lisbonne. Amin'ny volana Desambra, hanomboka sidina mankany Tel Aviv izy ireo ary amin'ny 2019 dia hanompo an'i Munich voalohany.